Umtshato Wokuziphatha | Isilimela 2022
Yiyiphi imibala echanekileyo ukugqoka kwimitshato?
Udidi Umtshato Wokuziphatha
Imibala efanelekileyo yokunxiba umtshato ibandakanya imibala eya kukuvumela ukuba udibane nabo bonke abanye abantu. Olu lusuku lomtshakazi; imibala eqaqambileyo okanye ...
Isinxibo seEtiquette sikaMama woMyeni
Umama wabanxibe umyeni ulungile, uphantsi, kwaye uyancedisana nonina weengubo zomtshakazi. Imithetho embalwa kunye nezikhokelo zinokunceda ...
Iintetho zesidlo sangokuhlwa sokuziqhelanisa
Yinto yesiko ukuba umbuki zindwendwe anike intetho yokuziqhelanisa nesidlo sangokuhlwa, kodwa lo msebenzi uza ngokulula kwabanye abantu kunabanye. Ukuba awuqinisekanga malunga nokuba ...
Koodade wethu ngomhla woMtshato wakhe
Umtshato unqwenela udade ngomhla wakhe omkhulu ungangqineka unzima, kodwa ngethamsanqa imiyalezo eyahlukeneyo yomtshato kudade ngendlela yemibongo sele ...
Yintoni oza kuyinxiba kumtshato waseBarn: Ngokuqhelekileyo kodwa uChic
Ukuthatha isigqibo sokuba uza kunxiba ntoni emtshatweni we-barn kulula xa unezinto ezininzi oqhele ukuzikhetha kwi-chic. Umtshato ogciniweyo unokuba yinto eqhelekileyo kodwa u-chic okanye nje ngokusesikweni njenge ...
Yintoni ekungafanelekanga ukuba uMhambi anxibe uMtshato?
Oko kunxitywa lundwendwe okanye akufuneki ukuba kunxitywe emtshatweni kubonakala kucacile, kodwa abanye abantu abayifanisi imfashini. Ngapha koko, ezinye iindwendwe zomtshato zinokubakho ...
Ukuziqhelanisa neengcebiso ngeToast
Umsebenzi wokunikezela intetho yesonka ngesidlo sangokuhlwa ngokwesiqhelo iwela kuyise womyeni nakwabanye abantu abambalwa abakhoyo. ...
I-Etiquette yomtshato yabazali bomyeni
Ukufumana ulwazi malunga nendlela yokuziphatha kunye nemisebenzi yabazali bomyeni kunzima, kuba ngokwesiko babenendima encinci emtshatweni ...
Imisebenzi yoMntu oBalaseleyo
Indoda ebalaseleyo ithatha imisebenzi emininzi kwindima yayo kumyeni. Ukwazi ukuba kulindelwe ntoni kuye ngaphambi nangexesha lomtshato kulungiselela oyena mntu ...
Ukuqonda isimilo sokuziqhelanisa nesidlo sangokuhlwa kunokunceda izibini ziphephe ukuthukwa okungenanjongo kwesi siganeko somtshato oqhelekileyo. Ngelixa ukungaziphathi kakuhle kusenokungabi njalo ...
Ukuziphatha ngokuHlala koMtshato
Oomolokazana kunye nabalungisa umtshato abaceba umtshato kufuneka baqwalasele ngononophelo kumalungiselelo okuhlala, kokubini kumsitho nakwindibano. Qinisekisa ukuba ...
Umtshato Ndiyabulela amanqaku
Iingcebiso ezimbalwa zokubhala amanqaku enkosi ngezipho zomtshato wakho zenza ukuba kube lula ukwenza lo msebenzi. Ngemizekelo yendlela yokuthetha indlela oziva ngayo, lo mtshato ...
Umtshato weRSVP Etiquette kunye neMicimbi
I-etiquette yomtshato i-RSVP ihlala ivakalelwa ngathi yindawo engwevu kwabanye abantu, kwaye kuphakama imiba xa kujongwa indlela yokuphendula. Oku kuyinyani ngakumbi emntwini ...
Ukuziphatha okuhle ngesipho somtshato
Indlela efanelekileyo yokunikela okanye yokwamkela isipho somtshato yenza ukuba kube lula ukwazi ukuba uza kuchitha malini okanye indlela yokuphendula. Ukwazi ukuba zeziphi izipho ezifanelekileyo ...
I-Etiquette yomtshato: Ngubani ohlawulela ntoni?
Imikhwa yokuziphatha yomtshato ikhokela izibini ekuqinisekiseni ukuba ngubani ohlawulela ntoni xa kuziwa kwiindleko zomtshato. Abanye abantu abatshatileyo bakhetha ukuyeka indlela yokuziphatha eqhelekileyo ...
Enkosi ngokuza kweMibongo yoMtshato evela kuMtshakazi noMyeni
Sebenzisa umbulelo ngokuza kwemibongo yomtshato evela kumtshakazi nomyeni njengendlela entle yokwazisa iindwendwe zakho ukuba zithetha ukuthini kuwe. Ukubhala ngokwesiko ...
Isikhokelo kwiMithi yeMali yoMtshato
Isikhokelo kubalulekile kuye nabani na odala imithi yemali yomtshato. Nokuba usebenzisa umthi wemali yomtshato kwimibhiyozo yakho kunokuba sisigqibo esinokuphikisana. Pha ...
Izambatho zeendwendwe zomtshato
Izambatho zeendwendwe zomtshato azidingi kuba ngumceli mngeni. Ubume bomtshato buya kuxela inqanaba lesitayile ngelixa indawo ...
Umgaqo wokuzibandakanya emtshatweni
Ixesha laxa abantu abatshatileyo besiba lixesha elimyoli. Kwabanye nangona kunjalo, kunokuba nzima, ngakumbi xa bengekho ...
Izimemo zoMtshato zaseNtshona
Izimemo eziprintiweyo zomtshato osentshona zinikezela ngeendlela ezahlukeneyo onokukhetha kuzo. Ukusuka kwisimemo esingacwangciswanga esineempawu ezisentshona kwipowusta efunwayo ...
ukukhumbula umntu obathandayo kwisikhumbuzo sokusweleka kwabo
amazwi kuyo yayi bubusuku obungaphambi kwekrisimesi
Ngaba abantu banokufumana iintshulube kwiikati
njani ukuba ingqokelela yengqekembe ivavanywe
iibhayisikile ngaphezulu kwama-300 lbs umfazi
Iivithamini In Food
Ubucwebe Boxes Nokugcina
Seaworld Park And Entertainment
Njani Oku Sebenzisa Makeup